सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको अधिकांश सूचकमा उत्साहजनक प्रगति, ५६.६६ प्रतिशतले बढ्यो मुनाफा - नेपालबहस
सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको अधिकांश सूचकमा उत्साहजनक प्रगति, ५६.६६ प्रतिशतले बढ्यो मुनाफा
| ११:४२:१२ मा प्रकाशित
१५ बैशाख, काठमाडौं । कोभिड १९ को कहरका बीच सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्मा मुनाफातर्फ उत्साहजनक वृद्धि गरेको छ ।
बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा मुनाफातर्फ ५६.६६ प्रतिशतको बढोत्तरी गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म सांग्रीलाको खूद नाफा २२ करोड ४४ लाखमा सीमित रहेकोमा सो बढेर यो वर्ष ३५ करोड १६ लाखको उचाईमा पुगेको हो ।
समीक्षा अवधिका लागि सांग्रीलाको वितरणयोग्य मुनाफा २४ करोड २८ लाखभन्दा बढी रहेको छ भने संचालन मुनाफातर्फ पनि बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म ३२ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित संचालन मुनाफा बढेर यो वर्ष ४७ करोड माथि पुगेको हो ।
कोभिड प्रभावकै बीच पनि बैंकले व्यवसाय विस्तारमा ध्यान दिएका कारण खूद ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म ८२ करोड १३ लाख रहेको खूद ब्याज आम्दानी केही बढी यो वर्ष ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीले रिटेन अर्निङतर्फ १५३.७३ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ । अघिल्लो वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १५ करोड ३४ लाखमा सीमित भएकोमा यो वर्ष बढेर ३८ करोड ९४ लाख माथिको उचाई चुमेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनतर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ । बैंकले यो अवधिमा ४१ अर्ब ९४ करोड बढी निक्षेप संकलन गरी ३५ अर्ब ६ करोड बढी कर्जा परिचालन गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बैंकले २९ अर्ब २५ करोड निक्षेप संकलन गरी २३ अर्ब ८६ करोड कर्जा परिचालन गरेको थियो । यसरी हेर्दा बैंकले निक्षेप करिब ४३.४० प्रतिशतले र कर्जा करिब ४७ प्रतिशतले बढाएको देखिन्छ ।
पाँचथरका गाउँभरि ज्वरोका बिरामी,अधिकांशमा कोरोना संक्रमण ४ मिनेट पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु २४ मिनेट पहिले
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु २५ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे ३१ मिनेट पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! ३९ मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! ३९ मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? ४१ मिनेट पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? ५८ मिनेट पहिले
अर्जुनधारा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङको निधन ६० मिनेट पहिले
अस्पतालको बरण्डामा बस्ने कि पेटीमा ? ५ दिन पहिले
जसपामा राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता ४ दिन पहिले
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न ८० लाख प्रदान १ हप्ता पहिले
किराना पसलमा आगलागी हुँदा पच्चीस लाखको क्षति ३ हप्ता पहिले
पर्वतमा २० शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन १ हप्ता पहिले
एकैदिन थपिए २४२८ संक्रमित, पाँच जनाको मृत्‍यु ४ हप्ता पहिले
आज ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २२४ जना, मृतकको संख्या १५७ पुग्यो ९ महिना पहिले
नक्कली बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सहित चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा १ वर्ष पहिले